'जापानमा अध्ययनरत छोरोको आमा-बुबालाई चिठी' - Nepal Japan
नेपाली समय : 03:39:04
जापानी समय : 06:54:04
16 April, 2016 10:10 |जापान , बिचार | comments | 2888850 Views
हजुरको जापानमा अध्ययनरत छोरोको तर्फबाट ढोग । नेपालमा हुँदा पनि कुनै दिन पनि म तपाईसंग ठाडो शिर बनाएर बोल्न सकिन, अनि आमालाई आड बनाएर आफ्नो कुरा राख्ने गर्थे।
त्यसैले होला आजसम्म पनि म तपाईसंग फोनमा १ मिनेटभन्दा बढी बोल्न सक्दिन ।
तपाई सोच्नु हुन्छ होला जहिले मासु खान्छ तर
कहिल्यै सोध्नुभयो किन? सँधै कुखुराको मासु मात्र खान्छस् भनेर ?
त्यत्रो पैसा त कमाउँदो रहेछ । तर कहाँ खर्च गर्छस् त भन्नेन प्रश्न पनि तपाईंको हुनसक्छ । म त्यसको पनि बेलिबिस्तार लगाउँछु ।
एक्लै बस्न धेरै मर्का पर्ने भएकोले एउटा साथीसँग बस्छु । कोठाको भाडा ६५ हजार येन तिर्छु, ग्याँस, पानी, बत्ती र ईन्टनेट गरेर लगभग २०हजार येन पर्न जान्छ । अनि चलेको चलन बुबा एउटा आईफोन लिएको छु १० हजार येन जति बिल आउछ । तर कोठा भाडा चाहिं चाहिं ठाउँ र घर अनुसारको हुन्छ । यत्ति बुझ्नु कि विद्यार्थीको मोटामोटी बस्ने खर्च यस्तै पर्न जान्छ । घरमा मलाई पनि एउटा आईफोन पठाइदिन मन थियो तर तपाईहरुले अंग्रेजी पढन सक्नु हुँदैन त्यसैले कहिले काही २ हजार येन पर्ने कार्ड किनेर फोनमा कुरा हुँदा के पकाईस् भन्नुहुन्छ । अनि म जहिले नि कुखुराको मासु भन्छु । तपाई सोच्नु हुन्छ होला जहिले मासु खान्छ तर कहिल्यै सोध्नुभयो किन सँधै कुखुराको मासु मात्र खान्छस् भनेर ?
जापानमा इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ त्यसको पैसा, बसेको बापत कर तिर्नुपर्यो त्यसको पैसा गरेर ५ हजार येन जति हुन जान्छ । अब मैले कमाएको पैसा कता गयो खै के भन्नु ।
पैसै-पैसाको देश जापान ?
कमाएर स्कूल, कोठा, रासन, यातायातको पैसा तिर्न त धाउधाउ हुन्छ।
अनि कसरी पैसा पठाउनु ?
फेरि फोन पनि गर्दैन रे भन्नुहुन्छ । कसरी फोन गरुँ?
जबकि पाँच दिन त स्कूल बाँकी दिन काममा जोतिन पर्छ
अनि मध्यरातमा लखतरान् परेर कतिखेर ढलौं जस्तो हुन्छ ।
हर्के काकासंग अस्ती स्काईपमा गफ भएको थियो रामे कतार गएको गोडा दुईबर्ष जति भयो, बर्षेनी आउँछ ,चाडबाड पारेर भन्दै हुनुहुनुथ्यो । उहाँलाई नि सम्झाइदिनु कि कामदार भिषामा कतार गएको जस्तो होइन विद्यार्थी भिषामा जापान जानु भनेको । स्कूलको पढाइदेखि कामको व्यबस्थापन अनि ईमिग्रेसनको नियम पालना नगरी आफैजे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्न । फेरि स्कूल गए नगएको सबै इमिग्रेसनले हेरिरहेको हुन्छ केही गडबढ गर्यो भने सिधै नेपाल पठाइदिन्छ ।